Ha eedeyn safiirka, ha eedeyn hogaamiyaha, waxaad dhahdaa hogaamiyaasha ingiriiska - TELES RELAY
ACCUEIL » COMPANY Ha ka xishoonin safiirka, eedeeysa hoggaamiyaha, u sheeg hoggaamiyayaasha Ingiriiska
Ha ka xishoonin safiirka, eedeeysa hoggaamiyaha, u sheeg hoggaamiyayaasha Ingiriiska
Afhayeen u hadlay Ra'iisul Wasaaraha Ingiriiska ayaa sheegay Isniintii in Theresa May ay "rumaysad buuxda" ku lahayd Kim Darroch iyo in bixinta "qiimeyn aan caadi ahayn" uu ahaa shaqo-wanag.
Waxa uu intaa ku daray in laga yaabo in May ay isku khilaafsan yihiin Darroch iyo in London ay la xiriirtay Washington si ay u sheegaan in khatartu ay ahaayeen "aan la aqbali karin oo qoomameynaya".
Cabaarada ayaa maalin walba la faafiyay Daily Mail Darroch ayaa ka digay xukuumadda Ingiriiska in "Trump's xirfadiisu ay ku dhammaan karto sharaf-darrada" waxaana lagu qeexay khilaafka Aqalka Cad sida "guntashada."
Sida laga soo xigtay Boostada, qoraallada faraha badan ee 2017 ilaa maanta. Wasiirka Arrimaha Dibadda Jeremy Hunt, oo ah musharaxa u taagan ra'iisal wasaaraha Ingiriiska, ayaa sheegay in haddii uusan wadaagin aragtida Darroch, uu ka hadlay Isniintii. Waxay wali ahayd "mid aad muhiim u ah" in diblomaasiyiin Ingiriis ah oo adduunka ah ay "sii wadaan inay na siiyaan qiimeyntooda caddaynta".
"Waxaan u baahannahay inaan doodi ku yeesho dhismayaasha (xukuumadda), waxaan u baahan nahay inaan awoodno inaan diidno," ayuu Hunt u sheegay saxaafada shir jaraa'id oo ka dhacay London Isniintii.
Waxa uu sheegay in ay jiri doonaan "baaritaan daadin" si ay "u helaan hoosta" dhacdada iyo in ay jiri doonaan "cawaaqib aad u culus" maamulaha ".
Sidoo kale, Xoghayaha Ingiriiska of State for International Trade Liam Fox eedeeyay amarka darroor "malaysan" - halkii Safiirka qudhiisu - wareysi uu siiyay BBC Radio 4 Monday.
"Wax dhibaato ah kuma laha danjiraha. Tani waa arrin anshax u ah shakhsiyaadka ka dhigtay daadankan, "ayuu yiri Fox, isaga oo intaa ku daray in uu rajeynayo in sharciga la ixtiraamo.
Isagoo ka hadlaya Washington, Fox wuxuu sheegay inuu la kulmi doono Ivan. ka Trump iyo "raali galin in adeegeena dadwaynaha ama qaybaha fasalka siyaasadeed" aanu "buuxin" waxyaabaha laga filayo "ee Boqortooyada Ingiriiska iyo Maraykanka.
Waxa uu intaa ku daray in kiiskan gaar ah, qawaani ku haboon "uu noqday mid aan horay loo arag. in hab aad u haboon oo aan la aqbali karin. "
Joorashu waxay wiiqaysaa xidhiidhada mudnaanta leh
Inkasta oo xildhibaannada ajnabiga ah ee waddamada oo dhan ay badanaa ku fekeraan kala-soocitaankooda, fasaxyada ka soo baxa daraasaadyadani waa marxalad adag oo siyaasadeed.
Marka laga jawaabo dhacdadan, Trump ayaa u sheegay wariyeyaasha Axaddii "Ma nihin taageerayaal weyn" Darroch iyo safiirka "ma uusan u adeegin UK".
Wasiirka Arrimaha Dibadda ayaa sheegay in Boqortooyada Ingiriiska ay u oggolaan doonto "inaysan kala go'in" xiriirka "wanaagsan ee xiriirka" ay la leedahay "asxaabteeda ugu dhow dunida".
Hase yeeshee duufaanta ayaa weli wiiqaya bilaha Darroch iyo dadaalka diblomaasiyadeed ee lagu dhisayo xiriirka iyo kalsoonida Trump iyo siyaasaddiisa siyaasadeed. .
Tani waxay sidoo kale yimaado waqti xasaasi ah in siyaasadda Britain, xubno ka tirsan xisbiga Konserfatifka ayaa haatan doorashada ra'iisul wasaaraha cusub si ay u guulaystaan ​​May, kaasoo ku dhawaaqay in uu iska casilay waxaa laba bilood ka hor ka dib markii ay ku guuldareysteen inay ansixinta ay heshiis in ay ka baxaan Baarlamaanka Midowga Yurub.  Nigel Farage, dhaqdhaqaaqe caan ah, waayo, Brexit ah, ayaa sidoo kale amaanay by Trump sida "qof weyn" ayaa ku yiri tweet in Darroch uu "gabi ahaanba u qalmin shaqada" ee safiirka.
Markii la waydiiyay BBC Radio 4 haddii ay ahayd doorasho, Farage wuxuu yiri, "Uma maleynayo inaan ahay nin sax ah shaqadan."
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://edition.cnn.com/2019/07/08/uk/uk-ambassador-leaks-theresa-may-jeremy-hunt-gbr-intl/index.html
2019: Ivory Coast oo xirtay Mali (1-0) - JeuneAfrique.com
CAE NIEVE ee San Bernardino California wuxuuna kusocdaa Mexico / Netflix wuu fashilmay adduunka oo dhan - VIDEO
Jacques Fame Ndongo ayaa ku dhawaaqday Bixinta Abaalmarinta Aqoonyanada Akadeemiyadda